यस प्रतियोगितालाई हेर्नुहोस्: DevDad बाट एक iMac जीत! | Martech Zone
यस प्रतियोगितालाई हेर्नुहोस्: DevDad बाट एक iMac जीत!
शुक्रवार, अक्टुबर 19, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हालसालै मैले कति धेरै प्रतियोगिताहरू र उनीहरू कत्ति राम्रो भएँ भनेर अलिक ध्यान दिएर हेरिरहेको छु, विशेष गरी मेरो आफ्नै $ १,००० सस्ता दिन लगभग यहाँ छ (केहि थप प्रायोजकहरू चाहिन्छ!)।
आज राती मैले यस पार गरे घर मा रहनुहोस् बुबा बुबा iMac दिनुहोस्-दूर। यो प्रतियोगिता राम्रो गरीयो। योसँग उत्कृष्ट पुरस्कार, उत्कृष्ट तस्विरहरू, र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनको लागि आवश्यकताहरूको विस्तृत सूची छ - प्रत्येक ब्ल्ग र प्रायोजकको प्रबर्धन गर्ने। माइकले एक ठूलो प्याकेज सँगै राख्यो - एक ब्रान्ड नयाँ २० ″ Apple iMac। योसँग २.० गीगाहर्ट्ज इंटेल कोर २ डुओ प्रोसेसर, १ जीबीको मेमोरी, २ 20० जीबी हार्ड ड्राइभ, x एक्स सुपरड्राइभ, र २० डिग्री चमकदार डिस्प्ले छ। यो माउस र किबोर्डको साथ आउँदछ, र $ ११2.0। को लागी खुद्रा हुन्छ।
यो यति राम्रो छ कि म यसमा एक पोस्ट लेख्न जाँदैछु र प्रतियोगिता प्रविष्ट गर्नुहोस्!
माइकको बारेमा पहिले - ब्ल्गर पछाडि देवदड, आफ्नै शब्दमा:
मेरो नाम माइक हो। म पछाडि आवाज हुँ DevDad.com। म २१ वर्ष पुरानो वेब डिजाइनर र एसईओ विशेषज्ञ ट्याम्पा खाडी, फ्लोरिडाबाट आएको हुँ। मलाई ब्लगि love मन पर्छ, र हालसालै मैले महसुस गरें कि मैले कहिले लेख्ने सबै काम नै हो, जबकि म वास्तवमै दिनको घरमा घरमा के हुन्छ भनेर लेख्न चाहान्छु। म यो अनलाइनलाई मेरो जीवनलाई घरमै बुबाको रूपमा, एक नयाँ व्यवसायको मालिकको रूपमा, र एक मान्छेको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछु कि कसरी उनी बानी परेको भन्दा बढी जुगाल गर्न खोजिरहेका छन्। म आशा गर्छु कि तपाई कसरी टाँसिरहनु भएको छ भनेर हेर्नका लागि।
माईकको आफ्नो साइटको राम्रो लेआउट छ, मलाई रंग, ग्राफिक्स र विशेष गरी उसकी सुन्दरी छोरीको फोटो मन परेको छ। निश्चित हुनुहोस् एकचोटी हेर्नु! माईकले भर्खरै BlogHelper.org शुरू गर्‍यो! यस साइटमा त्यहाँ केही राम्रो पठन छ यदि तपाईं विशेष रूपमा ब्लगि aboutको बारेमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने!
SitterCity को रूप मा, तिनीहरूको मिशन आमा बुबालाई उनीहरूको क्षेत्रमा देखभालकर्ताहरूसँग जोड्नु हो। साइटको यसका दुई पाटा छन् ... मान्छेहरू सिटर र ती सिट्टरहरू खोजिरहेका छन् जुन काम खोज्दैछन्! यदि तपाईं सुरक्षाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, साइटले सस्तो N 9.99 को लागि लेक्सिसनेक्सिस प्रयोग गरेर पृष्ठभूमि जाँच थप्न सक्छ।
त्यसोभए त्यहाँ तपाईंसँग यो छ, एकल पोष्टमा great उत्कृष्ट साइटहरू!
टैग: जो पुलिज़ीसन्देश बारसामाजिक बुकमार्कहरूउपकरणपट्टीमाथिल्लो पट्टीWordPress प्लगइन
कसरी एउटा Gourmet Pretzel खाने?
बाँच, हाँस र माया गर
अक्टूबर २०, २०१ at २:20० अपराह्न
म आज एउटा स्टोरमा खेल्छु। मसँग सँधै एक पीसी भएको छ, त्यसैले मैले 'म्याक वर्ल्ड' कहिलै चिनेको छैन। जे होस् iMac लाई एक परीक्षण ड्राइभ दिए पछि, म पक्का छु कि यसले ठूलो पुरस्कार दिन्छ। यो केटीको लागि सेटअप गरेको जस्तो कुनै कुरा हो?
Katie एक eMac, CRT iMac पूर्ववर्ती छ। यदि म जितें भने, यो पक्कै उसको कोठामा जानेछ!
उनी धेरै भाग्यमानी छिन्। त्यो कुरा राम्रो छ।
अगस्ट 24, 2008 मा 2: 47 AM
मलाई कलेजको लागि म्याक प्राप्त गर्न मनपर्छ। मलाई गिरावटमा कलेज सुरू गर्दैछु यस इम्याक चाहिन्छ।
मई 24, 2009 मा 4: 53 PM
मलाई वास्तवमै एक iMac चाहिन्छ। म करीव एक महिनामा भिडियो डिजाइन स्कूल सुरू गर्दैछु। आईमेक्ससँग आउटस्ट्यान्डिंग भिडियो सम्पादन छ